नेपालमा पहिलोपटक प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना सङ्क्रमितकाे उपचार,पहिलाे बिरामीलाई वार्डमा सारिँदै, दाेस्राेमा परीक्षण हुँदै « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas KHASOKHAS E-MAGAZINE
नेपालमा पहिलोपटक प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना सङ्क्रमितकाे उपचार,पहिलाे बिरामीलाई वार्डमा सारिँदै, दाेस्राेमा परीक्षण हुँदै
नेपालमा पहिलोपटक प्लाज्मा थेरापी प्रक्रियाबाट कोरोना सङ्क्रमितकाे स्वास्थ्य सुधार भएकाे छ । त्यस्तै, अर्का एक बिरामीमा उपचार शुरु गरिएकाे छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएर सघन उपचार कक्षमा भर्ना भएका एक जना विराटनगरका बिरामीमा प्लाज्मा थेरापीको परीक्षण सफल भएको हो ।
सङ्क्रमित निको भएपछि रगतमा भएको प्लाज्मा सङ्क्रमित व्यक्तिको शरीरमा पठाएर रोग विरुद्ध लड्न सक्ने बनाउनु अभ्यास प्लाज्मा थेरापी हो । डा. दासले उपचारबारे थप खुलाउनुभयो, “सङ्क्रमित र रगत दान गर्ने व्यक्तिको रगत समूह एउटै हुनुपर्यो ।” प्लाज्मा थेरापीका लागि डोनर उपलब्ध गराइदिन शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई आग्रह गरेको थियो । परिषद्ले काठमाडौं नजिकैको एक जना क्लाइन्ट खोजेर बिहिबार उपलब्ध गराएपछि थेरापी सम्भव र सफल भएको डा. दासले बताउनुभयो ।
७० प्रतिशत स्वास्थ्य अवस्था सुधार भएपछि बिरामीलाई आईसीयूबाट निकाल्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बिरामी भर्ना गर्दा ९० प्रतिशत अक्सिजन दिनुपरेकोमा थेरापीपछि २४ प्रतिशत मात्रै अक्सिजन दिनुपरेको छ ।
शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बिरगंजका अर्को एकजना बिरामीमा समेत प्लाज्मा थेरापीको परीक्षण गरिदैछ । डा. दासले प्लाज्मा थेरापीबाट बिरामी निको हुने दर बढ्नुका साथै मृत्युदर घट्ने विश्वास गरेको बताउनुभयो । उहाँले पहिलो परीक्षणमा ४८ घण्टाभित्रै ७० प्रतिशत सुधार देखिएकोले अर्को बिरामी पनि छिट्टै सुधार हुने विश्वास गरेको बताउनुभयो । प्लाज्मा थेरापीका लागि करिब चार देखि पाँच हजार रुपियाँ खर्च हुन आउँछ । यद्दपी हाल सरकारी खर्चमै प्लाज्मा थेरापी भएको हो ।